Sweden: Tirada dhimashada Coronavirus oo 4000 gaartay. - NorSom News
Afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyay, waxaa dalka Sweden xanuunka Coronavirus ugu dhintay dad gaaraya 31 qof, sida ay maanta shirkii jaraa’id ee maalinlaha ku sheegtay hay’adda caafimaadka bulshadu.
Guud ahaan tiradda guud ee dhimashada ee Sweden ayaa kor u dhaaftay 4 kun oo qof iyada oo iminka ay tahay 4029 ruux tan iyo inta la xaqiijiyay iney cudurka u geeriyoodeen.
Norway waxaa ilaa hada xanuunkan la diiwaangaliyay inay dhinteen 235 qof.
Previous articleCorona-virus, waxaan ka baranay baahida loo qabo dhismaha jaaliyad/Community soomaaliyeed oo rasmi ah.
Next articleOslo: IPTV SMART & TV BOX aad ka daawan karto dhamaan TV-yada soomaalida, Ciraayaha, carabta iyo caalamkaba.